Raspbian 2019-09-26 inosvika kunatsiridza rutsigiro rweRasperry Pi 4 | Linux Vakapindwa muropa
Kwekupedzisira Chikumi, iyo kambani yakagadzira imwe yemaplate akareruka ane mukurumbira pasi yakakanda iyo Raspberry Pi 4. Uku ndiko kusimudzira kukuru uko kunosanganisira, pakati pezvimwe zvinhu, rutsigiro rwe4K uye sarudzo ye4GB ye RAM, asi nemutengo wekubhadhara iwe unoda fan kuti irege kupisa zvakanyanya. Nguva pfupi yapfuura chikwangwani, kambani yakakanda vhezheni itsva yesystem yako, asi yakazviita nemamwe mabugs ayo anotarisirwa kunge akagadziriswa mukati Raspbian 2019-09-26.
Iyo nyowani vhezheni yeRaspbian inovandudza rutsigiro neiyo Raspberry Pi 4, asi zvakare inosanganisira zvimwe zvigadziriso senge rpi-eeprom chishandiso icho ichagadzirisa otomatiki iyo SPI EEPROM kune yazvino vhezheni pane yekupedzisira ndiro kuti usvike mune «Raspberry» mhuri. Iyo inowedzerawo rutsigiro rwekuwedzeredza (izwi rinonzwika sesu vedu vane rimwe remabhodhi madiki aya) kune mutyairi weFKMS. Uye ndezvekuti mushanduro dzakapfuura zvakakosha kumisa iyi sarudzo kubva ku raspi-config.
Raspbian 2019-09-26 ichagadzirisa SPI EEPROM otomatiki paRaspberry Pi 4
Dzimwe nhau dzinosvika mune iyi vhezheni:
Kunatsiridzwa kwekubatana kweBluetooth mune maAudio madhizaini nekumisikidza kwe "plug" tsika mune yefaira reALSA.
Yakagadziridzwa rutsigiro rwema mult-monitor setups.
Iyo yekuonesa maseturu chishandiso izvozvi inoratidza akaparadzaniswa mamenu ekugadzirisa uye zororo reti.
Mutsva mapfupi ekhibhodi: Ctrl + Alt-End inoratidza iyo yekudzima menyu uye Ctrl + Alt + M inofambisa bharaki rebasa pakati pevatariri.
RealVNC Muoni 6.19.715.
Iyo itsva vhezheni yeRaspbian ikozvino iripo uye nzira yakanakisa yekumisikidza iri kuburikidza NOOBS mugadziri, mugadziri uyo haangotibvumire isu chete kuisa Raspbian, asi achazviitawo nekutora mukana wekuchengeta kwese pane yedu micro SD kadhi. Kana iwe ukazviedza, usazeze kusiya zvako zviitiko mune zvakataurwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » Raspbian 2019-09-26 inosvika kunatsiridza rutsigiro rweRasperry Pi 4
Exaile mumhanzi anoridza inogamuchira mushure memakore mana